Deenmark oo beerista maandooriyaha Cannabis-ka la ogol yahay in la beero | Somaliska
Kolka aad maqasho maandooriyaha Cannabis ee misna la leeyahay waa la ogol yahay beerashadiisa ha moodin in taasi macnaheedu tahay in laga dhigay xor oo ciddii doonta ay beeran karto. Maya arrinku sidaas maahan ee waa mid looga gol leeyahay in adeegsado daawo ahaan.
Xilliga qaboobaha ee inu soo fool leh ayaa dalkaasi Deenmark waxaa ka dhaqan geli doona sharci fasaxaya beerita maandooriyaha Cannabis-ka . Dowladda dalkaasi iyo xisbiga xag jirka ah ee Dansk Folkeparti (DF) ayaa isku raacay in la dhaqan geliyo mashruuca beerita maandooriyahaas oo muddo afar sanno ah qaadaneysa.
Maadooriyahan oo daawo ahaan loo adeegsanaya ayaan noqoneyn mid meel kasta lugu beeran karo ama ciddii doonta ay sameeyn karto, balse waxaa lugu beerayaa dhismayaal loo sameeyey oo loogu adeegsan doono maadooyinka daawada laga sameeya.
Dhalinyarro soomaali ah oo kufsi ay kula kaceen gabar da’yar oo xukun lugu riday